Badweyntimes.com » Dhageyso: DF oo ku dhawaaqday Muqdisho laba maalin in ay Bandow tahay”Shacab & Baabuur ma socon karaan”Badweyntimes.com
Dhageyso: DF oo ku dhawaaqday Muqdisho laba maalin in ay Bandow tahay”Shacab & Baabuur ma socon karaan”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa Saxaafadda u sheegay in la xiraayo wadooyinka Magaalada Muqdisho, sidoo kalena la xadidaayo dhaqdhaqaaqa dadweynaha Muqdisho.
Duqa Muqdisho, ayaa sheegay laga bilaabo berri maqribkii inay xiran yihiin wadooyinka Magaalada Muqdisho, ayna sii xirnaan doonaan maalmaha Talaadada iyo Arbacada ee ina soo aadan.
Waxa uu sheegay ujeedada wadooyinka loo xiraayo inay tahay suggida ammaanka Magaalada, maadaama Arbacada ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ayaa sheegay Hay’adaha Waxbarashada inay fasaxaan Iskuulaadka iyo Jaamacadaha, maadaama Ardayda aysan aadi karin waxbarashada, mar hadii la xiraayo wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Daawo+Akhriso: khudbad kicisay Dareenka Shacabka uu Jeediyay Musharax Farmaajo…
DEG DEG: Sarkaal Sare kana Tirsan Ciidanka DF oo Xabsiga la dhigay..[MAGACIISA]
Hal Jawaab : Dhageyso: DF oo ku dhawaaqday Muqdisho laba maalin in ay Bandow tahay”Shacab & Baabuur ma socon karaan”
Soomaali Geesiga aastaay, mooryaankeeda mooneysaay, warkii loo Sheego qaadataay, dulucda warka kama dacaay, xirfadda cadawga ma fahantaay. War cadawga wax rabo guu Sheegi maayo iyo qofka uu wato laakiin wuxuu kaa gadayaa in uu baabi’iyo kan uu ka baqayo, aniga aqligeyga yarka ah Itoobiya in ay rabto in laga takhaluso Xasan si ay danteeda u gaarto.